buugagan darawalka tarjumay ee loogu talagalay dadka cusub ee USA
Ma rabtaa in aad si aad u barato in la wado? buugagan darawalka Halkan lagu tarjumay ee loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga. Click on images hoose si aad u download wadayaasha ah’ Buuggan oo ku qoran luqaddaada.
Study turjumay buugagan darawalnimada afkaaga hooyo
Akhrinta xusan buugagan darawalka turjumay ee USA ee afkaaga caawin doona inaad ka gudubto imtixaanka wadista. In dalalka badan, waxaad qaadan kartaa imtixaanka oo ku qoran luqaddaada. In dalalka kale, waa in aad imtixaanka ku Ingiriisi.
MUHIIM AH: buugagan Hadalladaasu ma aha kuwa gaar ah in aad gobolka iyo in ay la dhacsan laga yaabaa in. Waxay kaa caawin doona inaad wax ka barato, laakiin waa in la isticmaalaa oo kaliya si ay u caawiyaan sida qaar ka mid ah sharciyada laga yaabaa kala duwan ee gobolka. Waxaad u baahan doontaa ah Buugga darawalka rasmiga ah ee gobolkaaga sidoo.
guide Driver (Carabi)
Handbook Driver (Armenian)
Buugga Driver (Chinese)
Handbook Driver (Faransiiska)
Buugga Operation (Japan)
Tilmaame on driving (Khmer)
Hawl ee Manual (Kuuriyaan)
hage darawalka (Nepali)
Macluumaad loogu talogalay darawalka (Ruush)
Buugga Driver (Isbaanish)
Buuga darawalnimada (Soomaali)